လူတိုင်း အတ္တနည်းနည်းစီ လျှော့ကြဖို့ နဲ့ အချင်းချင်းစာနာ စိတ်ထားကြဖို့ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောပြလာတဲ့ သင်ဇာ၀င့်ကျော် – GaMone Media
Homepage / Celebrity / လူတိုင်း အတ္တနည်းနည်းစီ လျှော့ကြဖို့ နဲ့ အချင်းချင်းစာနာ စိတ်ထားကြဖို့ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောပြလာတဲ့ သင်ဇာ၀င့်ကျော်
လူတိုင်း အတ္တနည်းနည်းစီ လျှော့ကြဖို့ နဲ့ အချင်းချင်းစာနာ စိတ်ထားကြဖို့ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောပြလာတဲ့ သင်ဇာ၀င့်ကျော်
အောင်မြင်မှုတွေအခိုင်အမာနဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရပ်တည်အောင်မြင်နေသလို မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေအပြင် ပုရိသပရိသတ်တွေပါ၀န်းရံအားပေးကြတဲ့ သင်ဇာ၀င့်ကျော်ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သင်ဇာ၀င့်ကျော်ဟာ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူတသားတည်းရပ်တည်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို တတ်နိုင်သရွေ့လုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် လည်း သတင်းအချက်အလက်တွေကို တတ်နိုင်သရွေ့မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပြသနာအချို့နဲ့ပက်သက်ပြီးလည်း သင်ဇာဟာ သူမရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ အခုလိုရေးသား လာခဲ့ပါတယ်။ “လူတိုင်းအတ္တနည်းနည်းစီ​လျှော့လိုက်ကြရင်…..မနက်ဖြန်ပဲ ကမ္ဘာပျက်တော့မယ့်အတိုင်းတို့တိုင်းပြည်ကလူတွေ လုပ်လိုက်ရင် အလွန်အကျွံ့တွေချည်းဘဲ…ဂွေးတောက်ရွက်လည်း အငြိမ်မနေရ..အောက်စီမီတာလည်း တစ်အိမ်တစ်ခုဆောင်ထားချင်ကြတယ်..သာမန်အချိန် တစ်ခု ၂ သောင်းတန်လောက်က
ပလ္လင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်..ရောင်းမသွက်ခဲ့လို့ ဖုန်တက်နေတဲ့ မှန်ဘီဒိုအောက်ထပ်က ဟာတွေပါ ကုန်သွားတယ်…ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူတွေ အားပေး လိုက်ကြတာ…..။
တစ်ချို့များ ဝယ်နေလိုက်တာ တစ်သက်စာများ ဝယ်စုသလားမှတ်ရတယ်..တကယ်က အကြောက်လွန် အစိုးရိမ်လွန်ပြီး ဝယ်လိုအားလွန်ကဲ သွားရတာပါ….တနည်းပြောရရင် အတ္တစိတ် များသွားတယ်…ကဒ်၂၀ တစ်ပတ်ရောင်းအားရှိတဲ့ဆိုင်မှာ ၂၀ ပဲ သူမှာထားတယ်..
၅ ကဒ်ပဲထားဦး..ဒီလိုနဲ့ အဲလိုလူတွေ ဆုံမိသွားရင် ကြက်ဥ ကုန်ပါပြီပေါ့ဗျာ..တစ်နေ့ လုပ် တစ်နေ့စား ငွေကြေးချို့တဲ့သမားလေး ၂ ဥ လောက်ဝယ်ချင်တာကို မရနိုင်တော့ဘူး..
Previous post ကောက်ကြောင်း အလှလေးတွေ ပေါ်လွင်အောင် ပိုစ့်ပေးကြမ်း နေတဲ့ အိချောပို ….
Next post လုံးလုံး တင်းတင်း အလှတွေ နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ကပြထားတဲ့ ခက်ဝေမိုး ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး